Tilmaamaha MFI: algorithm xisaabinta, u isticmaal aaladaha kale ee farsamada | vfxAlert official blog
Tilmaamaha MFI - raadinta lacag firfircoon
Tusiyaha Qulqulka Lacagta (MFI) waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah Bill Williams "Theory of Chaos", sida lacag looga sameeyo ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah , taas oo muujineysa heerka soo jiidashada hantida ee maalgashadayaasha. Marka lagu daro dhaqdhaqaaqa ganacsiga danta, waxay sidoo kale tixgelineysaa mugga suuqa. Sida laga soo xigtay qoraaga, tani waxay noo ogolaaneysaa inaan go'aamino daqiiqadaha "soo galitaanka iyo bixitaanka lacagta firfircoon".
Saldhiggu waa qiimaha "caadiga ah" muddada la soo xulay, taas oo loo xisaabinayo macnaha xisaabeed ee Qiimaha Hooseeya, Sare, iyo kan Xiran. Qiimaha noocan oo kale ah, sida laga soo xigtay Williams, wuxuu si sax ah u muujinayaa xaaladda calaamadaha binary ee guuleysta marka loo eego kaliya qiimaha xiritaanka. Haddii qiimaha xilligan xaadirka ah uu ka sarreeyo kii hore, mugga lacagta ayaa lagu darayaa suuqa, haddii hoos u dhaca howlaha uu ka hooseeyo.
Qadarka "socodka lacagta" waxaa lagu qeexaa sida wax soo saarka qiimaha caadiga ah iyo tirada macaamil ganacsi ee muddada la doortay. Nidaamka calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah wuxuu bixiyaa gelitaanka suuqa isbeddel fiiqan oo ku saabsan socodka, kaas oo lagu cabiro isku dheelitirnaan qaas ah oo keenaya qiimaha guud ee u dhexeeya 0 - 100. algorithm kuma jiraan wax daciif ah, wuxuu raacaa qiimaha iyo ku siin kara calaamado horseed ah.
Marka loo eego aragtida Chaos, istiraatiijiyadda habdhaqanka suuqyada suuqa waa sida soo socota:
Ganacsatada leh jagooyinka jihada isbeddelka hadda socda ayaa qorsheynaya inay qaataan qayb ahaan ama dhammaystir faa'iido / lumis. Isla mar ahaantaana, kuwa ka ciyaaraya isbeddelka qolka ganacsiga ee Forex waxay kordhiyaan khasaarahooda waxayna sidoo kale isku dayaan inay xiraan xirfadaha. Laakiin labada dhinacba kuma degdegayaan inay furaan fursado cusub. Natiijo: MFI hoos ayuu u dhacay, isagoo xaqiijinaya hoos u dhaca mugga suuqa.
Marka mid ka mid ah dhinacyada uu go'aansado inuu suuqa ka beddelo ama uu dib u bilaabo isbedelka hadda socda, raasamaalku wuxuu ku qulqulaa iibinta ama iibsashada. Qiimaha MFI wuxuu markaa bilaabmayaa inuu koro kolba sida ay isbeddellada cusubi u soo baxayaan. Halkan waxaa muhiim ah in la fahmo in istiraatiijiyaddu ay tahay oo keliya inay tixgeliso jihada tilmaamaha, oo aan ahayn qiimeyaal gaar ah, gaar ahaan calaamadaha ganacsiga cryptocurrency .
Tilmaamaha MFI waxaa loo sameeyay si loo farsameeyo mugga sarrifka dhabta ah ee suuqa saamiyada, laakiin indho indheynta Forex iyo suuqgeynta 'crypto' waxay muujineysaa in qiimaha shilinta, halkaasoo kaliya tirada macaamil ee waqtiga go'an la tiriyo, sidoo kale lagu dabaqi karo iyada oo aan si weyn hoos loogu dhigin tayada calaamadaha. .
Seddex kooxood oo ah xulashooyinka Lacag Bixinta Lacagta Calaamadaha ganacsiga
Kooxda ugu horeysa ee calaamadaha waxay noqon doonaan aagag xad dhaaf ah iyo xad dhaaf ah oo heer u ah oscillators. Qalab kasta wuxuu u tiriyaa si kala duwan, laakiin mabda'a waa isku mid:
Haddii qiimaha tilmaamuhu uu ka sarreeyo heerka 20 (30) waxay ka dhigan tahay dhammaadka iibka oo waad furi kartaa CALL-option.
Ka bixida aagga la soo iibsaday, kiiskeenna, oo ka hooseeya heerka 80 (70) waxaa loo tixgelin doonaa calaamadda PUT-option.
Haddii qiyaasta shilinta sare ay sii socoto muddo dheer, tilmaameha MFI wuxuu u eg yahay inuu "ku dhego" aagagga ba'an. Iska ilaali tilmaamayaasha kale iyo calaamadaha ikhtiyaariga ah ee bilaashka ah, waxaa laga yaabaa inay jiraan meelo wanaagsan oo laga soo galo muddadan .
Wax yar uun ka hor isbeddelka isbeddelka, MFI-ga ayaa laga yaabaa inuu rogrogo isagoon gaarin aagagga daran. Xaaladdan oo kale, jihada macaamil ganacsi waxaa go'aaminaya heerka dhexe ee 50: burburka ka imanaya xagga hoose ilaa kor ayaa calaamad u ah ikhtiyaarka CALL ee loogu talagalay adeegga calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ah , laga soo bilaabo xagga sare ilaa hoose - waxaan fureynaa PUT-option.
Ka taxaddar xilliyada dhaqdhaqaaqa mala-awaalka ah iyo wararka, marka suuq firfircoon uu gebi ahaanba "garaaco" calaamadaha ganacsiga laba-geesoodka ah ee ka socda MFI, dhammaan istiraatiijiyadda falanqaynta farsamada ayaa joojiya shaqada. Waxaa lagugula talinayaa inaad u wareegto waqtiga H4 ama aad ka joogtid suuqa .
Tilmaamaha MFI wuxuu bilaabi karaa inuu u dhaqaaqo ka soo horjeedka shaxda qiimaha, taas oo noqon doonta calaamado dib u celin xoog leh. Halkan, qodobka ugu muhiimsan waa waqtiga - markii uu weynaadaba, waxaa lagu kalsoonaan karaa kala-baxa. Istaraatiijiyad loogu talagalay muddooyinka yar yar waxay qaadan kartaa isku dheelitirnaan kumeelgaar ah oo xoogagga ah kala duwanaan, taas oo magdhow la siin karo ka dib 30-60 daqiiqo oo suuqa ah, kala duwanaanshuhuna wuu dhammaadaa inkasta oo calaamadaha binaryku ay xor yihiin .
MFI si dhif ah ayey u siisaa kaladuwanaansho, laakiin haddii ay muuqdaan, macnaheedu waa bilowga dib u noqoshada ka dib 3-5 baararka waqtiga shaqada. Marka la eego calaamadaha dib u eegista binary, waxaan kaliya u shaqeynaa si toos ah (ikhtiyaarka CALL) iyo dib u celinta (loogu talagalay PUT-option) qaababka, oo laga furo laambadda ugu horreysa ka dib markaad ka gudubto aagagga ba'an iyada oo uu dhacayo wixii ka dambeeya qiimaha ugu sarreeya / ugu yar .
Falanqaynta garaafka ee Heerka Qulqulka Lacagta
On kumbuyuutarrada ganacsiga istiraatiijiyad badan oo kormeerayaal ah, dhammaan qaababka caanka ah ee falanqaynta garaafka ayaa si cad u muuqda, oo ay xaqiijiyeen labada istiraatiijiyad ee dib u noqoshada iyo istiraatiijiyadda sii wadida isbeddelka: "Madaxa iyo Garbaha", "Double or triple top / bottom", "Triangle" iyo kuwa kale. Badanaa, muuqaalkoodu waa dhowr xilli oo ka horreeya jaantuska qiimaha, taas oo suurtagal ka dhigaysa in marka ugu horreysa dhammaan looga baxo suuqa waqtigiisa lana hagaajiyo macaashka.
Sida oscillator kasta oo kaliya sida cunsur dheeraad ah ee istiraatiijiyad adag. Marka lagu daro tilmaamayaasha isbeddelka, waxay si fiican isugu darsameysaa Forex iyo tilmaamayaasha mugga cryptocurrency, oo had iyo jeer lala xiriirinayo socodka lacagta, waxayna ku siin karaan calaamado horseed u ah waqtiyada ka weyn H1.
Ku darista tilmaame isbeddel
Sida tilmaame isbeddel ah oo ku saabsan jaantusyada laba-geesoodka ah ee tooska ah, waxaan u adeegsan doonnaa Kooxda Bollinger Band (BB), oo ah miiraha meelaha laga soo galo MFI. Iyada oo loo marayo kanaalka sare ee BB, waxaan raadineynaa fursado loogu talagalay CALL-option, oo leh kanaal hoose, kaliya PUT-option. Suuqa dhiniciisa, waxaad ka ganacsan kartaa xudduudaha BB haddii ballaca kanaalka uu ka socdo 20-30 dhibcood. Waxaan la soconaa isbeddelka isbeddelka - ballaarinta fiiqan ee kanaalka ayaa muujinaya xasillooni darrada suuqa waxaana fiican inaad sugto xaqiijinta oscillator-ka.
Ku xoqdo meelo kala duwan
In kasta oo lagugula taliyay inaad isticmaasho waqtiyo dheeri ah, waxaad isku dayi kartaa inaad ku ganacsato ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ah signa ls oo ah suuq dhinac ah iyo isbeddel dhexdhexaad ah U dhig MFI jaantuska leh muddo 6 iyo heerar ah 70 iyo 30, iyo Celceliska Dhaqdhaqaaqa Sahlan ee leh 3:
CALL-option : shaxda qiimaha ayaa ka gudbeysa SMA hoosta ilaa sare; MFI wuxuu ka sarreeyaa heerka 30;
PUT-option : qiimaha wuxuu ka gudbayaa SMA kor ilaa hoos; MFI wuxuu ka hooseeyaa heerka 70.
Waxaan ka furaynaa ganacsi shumaca xiga xiga barta isgoyska, istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah ayaa bixisa xisaabinta dhicitaanka uguyaraan / ugu dambayn maxalliga ah, laakiin aan ka yarayn 5-7 shumacyo waqtiga shaqada. Iyada oo isbeddello xoog leh, waxaad furi kartaa dhowr ikhtiyaar.
Tilmaamaha MFI ee ku saabsan ikhtiyaarrada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa muujinaya isku dheelitirka hadda ee awoodda u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha, iyo sidoo kale saadaal ah sida ay u beddeli karto mustaqbalka dhow. Waa in maskaxda lagu hayaa in loo sameeyay si loogu adeegsado suuqa saamiyada, halkaas oo ay ku jiraan macluumaad muhiim ah oo ku filan marka lagu daro jaantuska, gaar ahaan mugga dhabta ah ee amar kasta iyo cidda dhigtay.
Dhanka kale, waxaan iftiimin doonnaa xaqiiqda ah in astaamaha ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah ee dhabta ah aan dib loo qorin, sidaa darteed istiraatiijiyadda maareynta halista iyo hababku waxay u adeegsan karaan tirakoobka baaritaanka xogta la soo dhaafay inay saldhig u tahay dejinta saxda ah ee saxda ah. Isla mar ahaantaana, sida oscillator kasta oo kale, Heerka Qulqulka Lacagta maahan qodobka ugu weyn ee lagu gaarayo go'aan ganacsi.
Tani waxay ka dhigan tahay in dib u noqoshadiisu aysan tilmaamayn barta bilowga ee isbeddel cusub oo dheer oo xoog leh. Waxay muujineysaa oo keliya dhaqdhaqaaqa doorbidka ganacsiga, iyo sida ay muhiimka u tahay isbeddelka dheelitirka awoodda, waxaa go'aaminaya aaladaha kale ee falanqaynta, labadaba farsamooyinka iyo astaamaha aasaasiga ah ee binary auto .